Ku Saabsan Tareenka Waddanka Burkina Faso | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAFRIKA226 Burkina FasoKu Saabsan Tareenka Waddanka Burkina Faso
24 / 02 / 2020 226 Burkina Faso, AFRIKA, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline
Ku saabsan burkina faso train
Burkina Faso waa waddan aan dhul lahayn oo ku yaal qaybta galbeed ee qaaradda Afrika. Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana iyo Ivory Coast ayaa ah xudduudda xuduudaha dalka (saacad dhanka waqooyi ka xigta). Wadanka, oo horey u ahaa gumeysi Faransiisku waagii hore, waxay xornimada qaadatay 1960-kii iyaga oo ku hoos shaqeynayay magaca 'High Volta'. Natiijadii ka soo baxday xasillooni darradii siyaasadeed ka dib xilligii xornimada kadib, koobab ayaa dhacay, 4tii Agoosto 1983 markii uu hogaaminayey Thomas Sankara, magaca wadanka waxaa loo bedelay Burkina Faso taas oo keentay kacaankii. Magaalada caasimada ah waa Ouagadougou.
Wadada Tareenka Burkina Faso
Waxaa jira hal wado tareen oo loo yaqaan Abidjan - Niger Line oo ku taal Burkina Faso, oo isku xirta magaalada caasimada iyo ganacsiga ee Abidjan iyo magaalada caasimada ah ee Ouagadougou. Hawshan, oo ay dhibi ka keentay Burkina Faso, oo ah dal dhul ah sababtuna tahay dagaallada sokeeye ee ka jira waddanka Ivory Coast, ayaa door muhiim ah ka ciyaara gadiidka alaabada ganacsi ee waddanku u leeyahay badda. Xilligan, xamuulka iyo gaadiidka rakaabka labadaba waxaa lagu fuliyaa qadkaan. Muddadii Sankara, in kasta oo daraasadihii lagama maarmaanka ahaa la qabtay si loo ballaariyo dhererka xariiqa magaalada Kaya si loo sii qaato hodantinimada dhulka hoostiisa ah ee laga helay halkan, howlahaas waxaa la joojiyay dhammaadkii muddada Sankara.
Diyaaradda Burkina Faso
Kaliya 33 ka mid ah 2 garoon diyaaradeed ee dalka oo dhan ayaa leh marinno rakiban. Garoonka Diyaaradaha ee Ouagadougou, oo ku yaal magaalada caasimada ah ee Ouagadougou, oo sidoo kale ah garoonka diyaaradaha ee ugu weyn dalka, iyo garoonka diyaaradaha ee Bobo-Dioulasso, waa labada garoon diyaaradeed ee la socda heerarka caalamiga ah ee dalka.
Wadanku wuxuu leeyahay hal shirkad diyaaradeed oo heer qaran ah oo la yiraahdo Air Burkina, oo xaruntiisu tahay caasimada Ouagadougou. Ka dib markii shirkadda la asaasay 17-kii bishii Maarso, 1967 iyadoo la raacayo magaca shirkadda 'Vol Volta', waxay bilowday inay fuliso duullimaadyadii ay fuliyeen shirkadaha ka yimid Faransiiska, magaca shirkaddana waa mid qaran ahaan loo cuskaday isbadalladii Sankara ee waddanka ka dhacay. Maaddaama mid ka mid ah ka qeybgalayaasha Burkina Faso, qeyb ka mid ah shirkadda Air Burkina ay si qarsoodi ah shaqsiyan loo leeyahay 2002, sababtuna ay tahay maaliyaddii dhaqaale ee shirkadda Air Afrique, taasoo ay maamusho dalal badan oo Afrikaan ah oo ay weheliyaan Faransiiska.
Ka sokow duulimaadyada gudaha, shirkadaha duullimaadyada ee Air Burkina waxay qabanqaabiyaan duulimaadyo celin ah illaa toddobo dal oo kala duwan. Wadamada ay duulimaadyada caalamiga ah ka fuliyaan waa: Benin, Ivory Coast, Ghana, Mali, Niger, Senegal iyo Togo.
Wadada Wadnaha Burkina Faso
Waxaa jira 12.506 km oo wadooyin ah oo dalka oo dhan ah, kuwaas oo 2.001 km la dhigey. Qiimayntii uu sameeyay Bangiga Aduunka sanadkii 2001, shabakada gaadiidka ee Burkina Faso ayaa lagu qiimeeyay inay wanaagsantahay gaar ahaan xiriirka ay la leedahay wadamada gobolka, Mali, Ivory Coast, GAna, Togo iyo Niger.
Khariidadda Gaadiidka Burkina Faso
Afhayeenka laanta DTO Antalya Erol Speke ee Tareenka Xawaaraha Sare iyo Gaadiidka Xamuulka Tareenka
Kulanka EIA waxaa lagu qaban doonaa mashruuca Tareenka ee Antalya-Kayseri
Qabyo Law on Xorreynta gaadiidka Tareenka ee Turkey
Ku saabsan dhismaha Qadka Tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars
Ku-xigeenka Xisbiga AK-ta Elvan Karaman wuxuu ka hadlayay maal-galinta tareennada
Antalya - Konya - Aksaray - Nevsehir - Kayseri Mashruuca Tareenka EIA Report…
Khadkii Tareenka ee Abidjan Niger